Semalt: Nzira yekudzivirira sei maIndaneti Pa Chrome ne 4 Zvinyorwa
Mawebhusayithi anodzivirira anogona kuva chiyero chakanaka chevashandi vakasiyana-siyana veIndaneti. Kune nzira dzakawanda kuburikidza nazvo vanhu vanovhara mawebsite pamakombiyuta avo. Semuenzaniso, vanhu vanochinja mafaira emafaira pamichina kuitira kuti vadzokere kune maIndaneti asingazivikanwi. Vamwe vanhu vanoshandisa DNS sevashumiri vakagadziridza vane mavhenekera evabereki. Mune mamwe maitiro, unogona kudzivisa mamwe mawebhusayithi panzvimbo ye browser - fascinator cheap. Pane nzira dzakasiyana-siyana dzaunokwanisa kudzivirira mawebsite kubva kune browser yako, iyo yakawanda inosanganisira kuwedzera.
Munyaya ino SEO, Igor Gamanenko, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , anopa pano zvimwe zve Chrome Chrome extensions zvinogona kukuvhara mawebhusayithi zvinosanganisira:
1. Personal Blocklist (neGoogle)
Iyi addon inogona kuita kuti shanduro idzivise mawebsite kubva pane mhinduro dzemhinduro yekutsvaga. Personal Blocklist Extension inogadzirwa nekambani yeGoogle, iyo inomiririra kuvimbika kwaro. Kana uchinge waisa chikwata ichi, iwe unogona kudzivirira webhusaiti kubva pane zvitsvakurudzo zvewebsite iyoyo. Iwe unogona kuita urongwa hwemasvingo uye nzvimbo dzaunoda kuvadzivirira kubva kuGoogle SERPs. Kuti uchengetedze mawebsite, unogona kuvhara Chikwata CheBhuku reMunhu wega uye kubvisa mawebsite aripo pachikwata chako chekuvimba.
Kuwedzerwa uku kunobatsira vashandisi bhokisi rondedzero yemamwe mawebsite aunoda kudzivisa. Kusiyana neBlocker Blocklist extension, iwe unofanira kuwedzera mawebsite iwe uri kuronga g kudzivisa kubva maonero avo..Ichi chiwedzerwa chine password iyo inogona kuisa mumucheche mwana. Iwe unogona kudzivirira kushandiswa kusingakoshi kuno. Kana wakamboiswa, iwe unogona kutarisira Block Site Extension nekudhonza maikirwo ayo pane peji. Iwe unokwanisa kuisa zvakare redirects kana kutoti unganise kubva pano.
Kuwedzera kwe Chrome kunodzivirira mamwe mawebhu kuburikidza nekuita kuti iwe ugadzire nguva yako yepakati. Somuenzaniso, unogona kuisa nguva yaunoda kushandisa pane imwe nzvimbo. Iyi addon inoita kuti zvive nyore kugadzira urongwa hwemawebsite iwe unoda kudzivisa. Iwe unogona kushandisa Nyukliya nzira yekudzivirira kuburitswa kwewebsite zvachose.
Chirongwa ichi chinouya pasina. Inopa dzakawanda zvekuchengetedzwa kwewebsite paIndaneti. TinyFilter inogona kubatsira mubhuku rekushandisa zvinhu zvinokuvadza kubva pakuratidza mudhivhisi wekombiyuta. Pano panewo password yekuvhara magetsi uye pamwe nekudzivirira kwevabereki zvimwe zvekushandura. Iwe unogona kurega kusvika kune iyi addon uchishandisa password, kugadzirisa mapato anogona kuigadzirisa. Gadzira menyu dzarudzo dzaro; iwe unogona kuvhara shanduro yechiratidzo kuti uchengetedze webhujiro rakadziviswa manyore.
Unogona kupinda mukutonga kwekutsvaga kwako kushandiswa uchishandisa nzira dzakawanda. Imwe yenzira dzakanakisisa dzekutonga yako Chrome browser ndeyekuwedzera. Browser extensions kufanana neBlock Site rubatsiro rwekudzivirira kukwanisa kwevamwe URL kubva pane browser yako. Semuenzaniso, unogona kuita urongwa hwemawebsite iwe usingadi kushanyira. Izvo zvinokwanisika kuchinja mamwe mapepa ekupfuura pane izvi zvakapedzisira kudzivirira vana kubva pakuita zvisarudzo. Ichi SEO chinyorwa chinogona kukubatsira iwe kuisa zvakanakisisa chrome addon kuti uchengetedze kuwanikwa kwewebsite mune yako Chrome browser.